साहित्यमा फेला परेका समुद्रको बारेमा १० उद्धरणहरू वर्तमान साहित्य
साहित्यमा फेला परेको समुद्रको बारेमा १० उद्धरणहरू
धेरै लेखकहरू यस विश्वासी दास सहित, समुद्रको साथ व्याकुल भएका छन्। एक घनिष्ठ सम्बन्ध, कहिलेकाँही वास्तवमा, वास्तवमा यसले हामीलाई पानीको शरीरमा धकेल्छ जुनबाट हामी सबै आएका थियौं, मिथक र किंवदन्तीहरू सिर्जना गर्ने, जसको किनारमा हामी प्रतिबिम्बित गर्न बाहिर हेर्छौं र रहस्य, जुन आफैमा, समुद्रमा छ जाने कलाकारहरूको काममा आमन्त्रित गरियो शेक्सपियरदेखि भर्जिनिया वूलफ, पाब्लो नेरुदादेखि गेब्रियल गार्सिया मार्क्वेज.
भर्खरको खोलिएको ग्रीष्मको फाइदा उठाउँदै, म तपाईंलाई निमन्त्रणा गर्दछ यसमा आफूलाई झल्काउन र स्फूर्ति दिन साहित्यमा फेला परेको समुद्रको बारेमा १० उद्धरणहरू.
नदी हाम्रो भित्र छ, समुद्रले हामीलाई चारै तिर घेरेको छ;
समुद्र पनि पृथ्वीको धार हो, ग्रेनाइट
एक जोसम्म आइपुग्छ, समुद्री किनारहरू जहाँ उसले शुरू गर्छ
अर्को अधिक आदिम सिर्जनाको उहाँको नमूनाहरू
स्टारफिस, लिमुलस, ह्वेल फिर्ता;
पूलहरू जहाँ यसले हाम्रो जिज्ञासा प्रदान गर्दछ
सब भन्दा नाजुक शैवाल र समुद्री एनीमोन।
हाम्रा घाटाहरू हावामा फालिनुहोस्, फाटेको वेब,
झींगाको भाँडा को हिस्सा, OA भाँचियो
र मृत विदेशीको टोली। समुद्रमा धेरै आवाजहरू छन्,
धेरै देवताहरू र धेरै आवाजहरू।
TS इलियट द्वारा ड्राई साल्भेजेस
जे भए पनि, म तपाईंलाई यहाँ रहन मन पराउँछु, यस अद्वितीय कुञ्जीमा, मियामीबाट १ 157 miles माईल र क्युबाबाट केवल 90 ० समुद्रको बीचमा, त्यहाँबाट समान हावाको पानीमा; र कुनै पनि विपत्ति बिना।
एक कथाको अन्त्य, रेनाल्डो एरेनास द्वारा
"पाँच बुहारी गहिरो तपाईंको बुबा,
तिनीहरूका हड्डीहरूले कोरल बनाए।
तिनीहरू मोतीहरू हुन् जसलाई उसको आँखा थियो।
उहाँमा कुनै पनि चीज विघटित भएको छैन।
यद्यपि समुद्रले यसलाई परिवर्तन गरेको छ
धनी र अनौठो केहि मा।
अप्सराहरू, हरेक घण्टा, उनीहरूको घण्टी बज्छन्। "
टेलिमेस्ट, विलियम शेक्सपियर द्वारा
समुद्र केवल समुद्र!
बुबाले किन मलाई यहाँ ल्याउनुभयो?
किन तपाईंले मलाई खन्न गर्नुभयो
सपनाहरूमा, ज्वार लहर
यसले मलाई मुटुले खींच्यो।
म यो लिन चाहन्छु।
बुबा किन तपाईं मलाई ल्याए
समुद्र समुद्री, राफेल अल्बर्टी द्वारा
पाँच बुहारी गहिरो तपाईंको बुबा,
अप्सराहरू, हरेक घण्टा, उनीहरूको घण्टी बज्छन्।
समुद्र मेरो कानमा बज्यो। सेतो पंखुडीहरू समुद्री पानीले अँध्यारो हुनेछन्। तिनीहरू एक क्षणको लागि तैरनेछ र डुब्नेछ। छालहरूमा मलाई लिई म यसको माथि उफ्रन्छु।
लास ओलास, भर्जिनिया वूलफ द्वारा
मलाई समुद्र चाहिन्छ किनभने यसले मलाई सिकाउँछ:
मलाई थाहा छैन म संगीत वा चेतना सिक्छु कि:
मलाई थाहा छैन कि यो एक्लो हो वा गहिरो हो
वा केवल कर्कश वा चमकदार आवाज
माछा र जहाजहरूको धारणा।
पाभलो नेरुदा द्वारा समुद्र
र एल्डर भन्छन् कि ऐनूरको संगीतको प्रतिध्वनि अझै पृथ्वीमा कुनै पनि पदार्थमा भन्दा पनि पानीमा रहन्छ; र इलवाटारका धेरैजसो बच्चाहरू अझै सागरको आवाजलाई बेवास्ता गर्दछन्, यद्यपि उनीहरूलाई अझै सुन्दैनन् कि उनीहरूले के सुन्छन्। "
सिल्मेरिलियन, JRR टोकिएन द्वारा
उनले समुद्रमा हेरे र महसुस गरे कि उनी कति एक्लो थिए।
ओल्ड म्यान एण्ड द सी, अर्नेस्ट हेमिंगवेले
मार्चको एक रात शहरमा आउँदछ, समुद्रबाट आउँदछ, गुलाबको गन्ध जुन त्यहाँका केही बासिन्दाहरूले महसुस गरेको छ र जसमध्ये दुईलाई मात्र पक्का छ, टोबियास, एक जवान मानिस, र पेट्रा, एक बुढी महिला।
गब्रिएल गार्सिया मार्किज द्वारा हराएको समयको समुद्री।
समुद्रले उसको सीमित शरीर काट्यो, तर उसको आत्माको अनन्ततालाई डुबायो।
मोमन डिक हर्मन मेलभिले द्वारा
पुस्तकहरुमा फेला परेको समुद्रको बारेमा अरू केहि उद्धरणहरु तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साहित्यमा फेला परेको समुद्रको बारेमा १० उद्धरणहरू
«सागरले उनलाई त्यसबेलासम्म देखेका सब भन्दा अचम्मका चीजहरू थिए। यो ठूलो र गहिरो थियो, मैले कल्पना गर्न सक्ने भन्दा बढि। यो समय, समय र स्थान अनुसार रंग, आकार, अभिव्यक्ति परिवर्तन भयो।
चराको क्रानिकल जसले संसारमा हावा दिन्छ, Haruki Muakaami
कुहिरो र समुद्री पाल, अरू केहि पनि छैन !!! एक्लो महसुस गर्नका लागि, र यो कि तपाईंको संसार तपाईंको छेउमा छ,
ज्याकीलाई जवाफ दिनुहोस्
कसरी तपाईंको उपन्यास चरण दर चरण सुधार गर्न